Madaxweynaha Galmudug iyo C/raxmaan C/shakuur oo ka wada-hadlay shirka saddexaad ee Dhuusmarreeb – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmad Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa magaalada Muqdisho xalay kula kulmay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir C/raxmaan C/shakuur.
Kulankan oo ka dhacay hoyga uu ka degen yahay magaalada Muqdisho Madaxweynaha Galmudug ayaa loogaga hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Dowlad goboleedka Galmudug.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir C/raxmaan C/shakuur, oo ka war bixinayay shirka ayaa sheegay in kulan talo wadaag ah ay yeesheen Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmad Cabdi Kaariye (QoorQoor).
Kulanka waxaan uga wada-hadlanay guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan Galmudug iyo sida ugu habboon ee uu ku guulaysan karo shirka Dhuusmarreeb 3, ayuu yiri.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmad Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor), ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada mogadishu, waxaana uu kulamo la qaadanayay siyaasiyiinta iyo xubnaha ku jira dowladda.